Cristiano Ronaldo oo faan & isqaad qaad raaxada isaga qaaday Video+Sawiro – SBC
Cristiano Ronaldo oo faan & isqaad qaad raaxada isaga qaaday Video+Sawiro
Posted by editor on Siteenbar 16, 2011 Comments
Xidiga kubada cagta ee kooxda Real Madrid & qaranka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa faan iskula dhaqaaqay ka dib markii uu isku tilmaamay “Taajir, quruxlow ah”.
Hadalkan ayuu kaga jawaabey Cristiano Ronaldo ka dib markii la waydiiyey sida uu arko wacdarihii ka qabsadey taageerayaasha kooxda Dinamo Zagreb oo Real ay kula ciyaartey gurigeeda kulamada kooxaysiga ee Champion League-ga.
Ronaldo ayaa waxaa qaylo ugu dhaqaaqay oo ku oriyry taageerayaasha kooxda Dinamo Zagreb, iyagoo ku orinayey xili kasta oo uu kubada laaco ama qabsado.
Ronaldo oo garsooraha ciyaarta u dacwoonaya
“Waxaan u maleynayaa in ay taasi tahay sababtoo ah waxaan ahey taajir, quruxlow ah isla markaana ciyaaryaha sare, waana sababta dadku iiga maseyranayaan” ayuu yiri Cristiano Ronaldo.
Ronaldo ayaa hadalkiisa sii raaciyey cadeyn ah uma hayo arimahaasi”.
26 jirka ah ciyaaryahanka labaad ee dunida ugu mushaarka badan ka dib markii uu ka qabsadey booska koowaad weeraryahanka reer Cameron Samuel Et’o oo kooxda Anzhi ee dalka Ruushka, ayaa ciyaartii Real Madrid ay la yeelatey Dinamo Zagreb waxaa si ba’an u beegsanayey ciyaaryahanada khadka dhexe & daafaca kooxda Zagreb, iyadoo Ronaldo uu si ba’an u dhaliilsanaa garsoorahii ciyaartaasi Svein Oddvar Moen isagoo sheegay in uu rumeysan yahay in ciyaaryahanada waa weyn aanay ka helin ilaalintii loo baahnaa garsoorayaasha.
“Waa niyad jabsanahay, waayo waxaan maqlaa garsoorayaasha ciyaaraha oo sheegaya inay ilaalin doonaan ciyaartoyda xirfada leh, hadana waxaan arkaa kuwa aan la taaban karin, laakiin anigu waxaa isku arkaa mid la beegsanayo” ayuu yiri Ronaldo oo niyad jab ka muujiyey garoosarayaasha qaarkood.
Link-ga Video hoose ka daawo wacdarihii ka qabsadey ciyaartaasi Ronaldo.HALKAN RIIX